वचनको पालना | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 01/29/2011 - 12:14
“काम फत्ते भयो त पूर्ण ?” हातको सियोलाई टोपीमा सिउँरिदै जिज्ञासाको झटारो तेर्साउँछु म उसित । ठूलो खकाने झोला काँधमा बोकेर सुसेल्दै ऊ खर्कबाट ओरालो लाग्छ । मेरो सोधाइ, प्रश्न भनौं वा जिज्ञासा उसले सुन्यो या सुनेन, कि त काम अधुरो भएको हुनुपर्छ र मेरो मन साघुराउन उसले वास्तबिकता ओकल्न चाहेन अथवा सुनेर पनि बुझ पचाउँदैछ । त्यसो त कहिले पो राम्रो मिजासिलो बोलिले नजरमा नजर जुधाएर बोलेको थियो र मसँग । पूर्व दिशा म बस्दा पश्चिम मुहडा फर्काएर हिँड्छ, हरेक मेरा हरेक शब्दलाई हेय, पाराले जवाफ दिने बानी भनांै वा आचरण छ उसको । म नाताले दाजु हूँ, शैक्षिक योग्यताको हकमा उसँग पौठेजोरी खेल्ने सामथ्र्य ममा छैन, त्यो म बुझ्छु तर त्यसको मतलब म उसँग हरेक समय, पल झुक्नु पर्छ, डराउनु पर्छ, हच्किनु पर्छ भन्ने त छैन । मेरो शिरले उसको भन्दा बढि शीत थापेको छ, मेरो आङ्गले बढिनै भोटा फटाएका छन् ।उसको तुलनामा गोडा पाँचैवटा हिउँद बढि मैले थेगेको छु तर पनि बाँसको मुनाझैं झुक्नु परेको छ मैले पटक पटक............. । कसिङ्गरझैं बढारिनु पर्छ कुचाले हरेक साँझ र बिहानमा । मायाको बन्धनले नझेल्दो हो त जमानामा नै कमण्डलु बोकेर काशी गयाको बाटो तताउँथे । एकहोरो बिचार उग्राइमैं म कलको पाङ्गो बेस्सरी घुमाउँछु, त्यो घुमाइसँगै घुम्छ मन, सोंचाइ र जीवन, एकजोर मयलपोस जसरी भएपनि आजै सिलाएर सिध्याउनु छ नत्र मुखियाको हप्काई असिना झैं बर्षन्छ मेरो शिरमा । कपडा सिलाउँदा सिलाउँदै उचालेर हेर्छु, आधा आधी मात्र भएको हुन्छ । घाम डाँडातिर धमाधम ओर्लंदै छ । अब दिन धेरै बाँकी छैन, मन अमिलो बन्छ ।
काँधको कल झिकेर पिंढीमा बिसाउन मात्र के लागेको हुन्छु कताबाट हो कुन्नि हुत्तेर कुखुराको चल्लो भ्याट भ्याट गर्दै मेरो खुट्टामा लट्पटिन आइपुग्छ । उसले पीडा मिश्रित स्वर पनि अलाप्दै छ । म उसलाई उठाएर भुइँमा राख्छु एउटा खुट्टाले टेक्दैन । रगतको छिटाले भुत्ला पनि केही भिजेको छ यसो नियालेर हेरेको त सानो छालाको त्यान्द्रोले मात्र खुट्टालाई जोडेर राखेको रै‘छ । नत्र पुरै छुट्टेको अवस्थामा, मन भित्रभित्रै उकुसमुकुस भएर आयो । चोट त चल्लालाई लागेको हो तर पीडा मलाई भयो “हरे ! कसले यस्तो बनाइदियो होला ? बिचरो यसलाई कत्रो मोहले दुईदिनको काम दाउमा लगाएर ल्याएको थिएँ ,खुट्टा नै पो भाँचिएछ त ।” म चल्लालाई हातमा लिएर मायाले मुर्साछु । “ओ हो । आफ्नो अर्घेलो चाहि पटक्कै देख्ने होइन उल्टै अर्कालाई देखि सहन्नन् यिनी । दिनभरी लगाएर रोपेको रायोको बिरुवा एकै छिनमा पो उतारि दियो तिम्रो साँढेले ।” दैलोमा हसिया बोकेर चिच्याउँदै उभिन्छे बुहारी । “हरे ! तिम्रो बुद्धि, यो काम गर्न हुन्छ र यो गर्न हुदैन भन्ने ज्ञान भएको भए यो पंक्षीनै हुने थिएन । यही त फरक छ हामी र पशुपंक्षीमा । मान्छेलाई त गल्ति गर्दा सम्झाइ बुझाइ गरिन्छ, यातना दिइन्न भने बिचरो यो पंक्षीलाई किन यति सकस दिएकी तिमीले ?” मेरो आवाज भुइँमा खस्न नभ्याउँदै –“चुप लाग बुढा, बढि बोल्ने हैन । यो कुखुराको त्यति बिघ्न माया लाग्छ भने राख्नु नि सन्दुकमा हालेर, कमसेकम मेरो सागबारी त फाँड्न आउन्न, आज त खुट्टामात्र छिनाली दिएँ । भोलि पनि मेरो सागबारीमा पस्यो भने दिउँसै कराइमा तारेर एक डवका जाँडसँग चपाउँछु ।” खुट्टा बजार्दै भित्र जान्छे ऊ । बिचरो चल्लो भूइँमा पल्यात्त पसारी रै‘छ । मन कटक्क दुखेर आयो तर दुख्नु के थियो र यस्ता झिना मसिना घट्ना त दूध र भात हुन थालेको छ मलाई । चल्लो समातेर भित्र खोरमा लगि थपक्क राख्छु । अब त साँझ पनि बिस्तारै भित्रन थालेको छ । ला ! आज पनि मयलपोस सकिएन, राती अबेरसम्म टुकीमा सिउन सक्दिन बुढेसकालले सताएर हो कि एकछिन बत्तीमा काम गरेपछि आँखा पोलेर आँसु खस्दा केही देखिँदैन । भोक त छैन तर साँझमा भोकै बस्दा मान्छे मरेर छाक छोडेको जस्तो हुन्छ भन्छन् भोकै पनि के बस्नु ? थकाइले भुतुक्क भएको छु । जाँगर नलाई नलाई अँगेनाको दाउराका ठुटा ठाकठुक पारेर आगो बाली ढिंडाको पानी करार्ईमा बसाल्छु । बूढो शरीर शारीरिक थकाई र मानसिक थकानले थिलथिलो बनाएको हुन्छ । जति मरिमेटेर काम गरेपनि साँझ बिहान हातमुख जोर्न सधैँ धौ धौ, के कमाउनु बिष्ट ? के सिलाउनु कपडा ? अनायासै लामो सुस्केरा निस्कन्छ मुखबाट । एक डवका जाँड भएपनि सट्ट पिउँथे र लडाउँथे यो बूढो शरीर जमिनमा, जाँड ! कहाँ पाउनु ? आफूलाई बनाउन न जाँगर चल्छ न त बनाउनको लागि प्रसस्त अन्ननै बाँकी हुन्छ । भएको खेतबारी कान्छाले हडपि हाल्यो । एउटा खेत त उसैलाई पढाउँन खातिर जिम्मल कहाँ धितो राखेर पैसा निकालेको थिएँ तर............... । कमाइ समाइ केही होइन भनेको बेला ब्याज बुझाउन नसक्दा ब्याजको स्याज गर्दै जिम्मलले नै हडप्यो । उल्टै मैले बेचेर खाएको भन्दै पटक पटक टोकस्छन् भाइबुहारी । आमाले पनि बुढेसकालमा आएर बुद्धि बिगारिन् कसलाई के भन्नु, पचासको उमेर ढल्कदा पनि कुन्नि कुन जोसमा एउटा बिष्ट टिपेर हिँडिन् । नहिडेर पनि के गरुन्, यो अहंबादी समाजले सानो जात र ठूलो जातको पर्खाल तेर्साएर हामीलाई सधँै पैतलाको धुलो बनाइरहे, त्यसमा पनि आफ्नै आमा बैगुनी भएपछि कस्को के लाग्छ ? देशमा परिवर्तन आयो, यो दल त्यो दल स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, समानताको भाषण र नारा घन्कन्छ तर ब्यवहारमा सधँै छोइ छिटो................ ।